မိန်းမရဲ့မွေးနေ့အတွက် သူကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ထားတဲ့ “အဆုံးမရှိ ” ဆိုတဲ့ သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို အမှတ်တရ ဖော်ပြလာတဲ့ ဇာဏ်ခီ – Cele News TV
မိန်းမရဲ့မွေးနေ့အတွက် သူကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ထားတဲ့ “အဆုံးမရှိ ” ဆိုတဲ့ သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို အမှတ်တရ ဖော်ပြလာတဲ့ ဇာဏ်ခီ
မြန်မာ ရုပ်ရှင်လောကထဲကို သူများနဲ့ မတူတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင်မှီဇာတ်ကားတွေကို ချပြပြီး အကောင်းဆုံး ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ခီမောင်နှံလို့ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီနဲ့ ဇာဏ်ခီပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့ အချိန် အထိလည်း ပရိသတ်တွေက သူတို့ရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ကို မျှော်လင့်နေကြဆဲပါ ။
ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားကျနေရတာပါ။ အခုလည်း ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် သူကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ထားတဲ့ သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို အမှတ်တရ ဖော်ပြလာပါတယ် ။ ၂၁ကြိမ်မြောက် မွေးနေ့ အတူတူကျင်းပခွင့်ရတဲ့နှစ်လို့လည်း ရေးသားထားပါသေးတယ် ။
ဗီဒီယိုလေးနဲ့ အတူ အမှတ်တရ ဖြစ်စရာစကားလေးတွေကိုလည်း ” Happy Birthday to my wife! ဒီနှစ်က ကျနော် Chris နဲ့ ၂၁ကြိမ်မြောက် မွေးနေ့အတူတူကျင်းပခွင့်ရတဲ့နှစ်ပါ။ နောက်ထပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်အထိ အတူတူကျင်းပခွင့်ရချင်ပါသေးတယ်။ I will always love you. သူ့မွေးနေ့မှာ သူ့အတွက်ရေးထားတဲ့သီချင်းလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးရဲ့နာမည်ကို “အဆုံးမရှိ” လို့ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးနဲ့အတူမျှဝေခံစားနိုင်ဖို့တင်လိုက်ပါတယ်။ (Quality မကျစေချင်တဲ့အတွက် You Tube မှာပဲတင်ထားပါတယ်) ပြီးတော့ ဒီသီချင်းကို Chris အတွက်ရေးထားတယ်ဆိုပေမယ့် တိုင်းပြည်ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူ့မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ရုန်းကန်နေကြသူများအားလုံးအတွက် ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အပန်းပြေစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတင်ဆက်ပါတယ်။ အားလုံးလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေ။ ” ရေးသားထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးရင်း မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အနုပညာများ၏ အမှုများ ယနေ့တွင်ပိတ်သိမ်း